लगातार घटिरहेको सुनको भाउ आज बढ्यो, कति पुग्यो ?
काठमाण्डौ । गत सातादेखि लगातार ओरालो लागिरहेको सुनको भाउ आज मंगलबार भने उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँ बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९० हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९० हजार ५० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो सोमबार सुनको भाउ तोलामै ७०० रुपैयाँले घटेको थियो।...
सुनको भाउमा लगातारको गिरावटमा ब्रेक, आज कतिले बढ्यो ?
काठमाण्डौ । सुनको भाउमा लगातार आइरहेको गिरावटमा ब्रेक लागेको छ। सुनको भाउ आज आइतबार बढेसँगै ओरालो यात्रामा ब्रेक लागेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँले उकालो लागेको छ। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९३ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत...
आज सुनको भाउ उकालो लाग्यो, साताभरि रु. २ हजारले घट्यो
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको भाउ उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९५ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बिहीबार तोलामा २०० रुपैयाँ घटेको सुनको भाउ गत बुधबार १००...
फेरि बढ्यो सुनको भाउ, आज तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । हिजो मंगलबार भारी गिरावट आएको सुनको भाउमा आज बुधबार झिनो बढोत्तरी भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा १०० रुपैयाँले उकालो लागेको छ। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ९०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ। लगातार बढिरहेको सुनको भाउमा हिजो मंगलबार भारी...
सुनको भाउमा उकालो यात्रा कायमै, आज तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । साताको दोस्रो कारोबार दिन आज सोमबार पनि सुनको भाउ उकालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो आइतबार पनि सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले...
सुनको भाउ लगातार बढ्दै, चाँदीमा पनि उस्तै
काठमाण्डौ । सुनको भाउ उकालो लाग्ने क्रमले यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार पनि निरन्तरता पाएको छ। लगातार बढिरहेको सुनको भाउमा आज पनि तोलामा ५०० रुपैयाँले उकालो लागेको छ। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। गत शुक्रबार...
सुनको भाउ फेरि उकालो लाग्यो, यो सातामात्रै तोलामा रु. २७ सय बढ्यो
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको भाउ फेरि ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामै १ हजार रुपैयाँले उकालो लागेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९६ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बिहीबार भने सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले...
सुनको भाउमा लगातारको बढोत्तरीमा ब्रेक, आज घट्यो
काठमाण्डौ । लगातार उकालो लागिरहेको सुनको भाउ आज बिहीबार ओरालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा १०० रुपैयाँले ओरालो लागेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९६ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९५ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो सुनको भाउ तोलामा ९०० रुपैयाँ बढेको थियो। यो बढोत्तरीसँगै...
सुनको भाउमा लगातार बढोत्तरी, आज तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । सुनको भाउ उकालो लाग्ने क्रमले बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज पनि सुनको भाउ तोलामा ९०० रुपैयाँले बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९६ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९५ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो मंगलबार पनि सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको थियो। हिजो...
उकालो लाग्यो सुनको भाउ, आज तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । लगातार घटिरहेको सुनको भाउ यो साता कारोबारको पहिलो दिन आज आइतबार उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९५ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ। दसैँबिदापछि गत बिहीबारबाट कारोबार खुले पनि सुनको भाउ दुई दिन...
सुनको भाउ आज पनि उकालो लाग्यो
काठमाण्डौ । सुनको भाउ आज बिहीबार पनि उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले बढेको हो। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९५ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९५ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। सुनको भाउ हिजो बुधबार पनि तोलामा ८०० रुपैयाँले बढेको थियो। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९५ हजार...
आज कति छ सुन–चाँदीको भाउ ?
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ९०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बिहीबार सुनको भाउ स्थिर रहँदै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ५०० रुपैयाँ...